Horonantsary tao amin’ny TVM Miteraka resabe tsy mety vita
Andodabe – Toamasina II Tratra ilay biby hafahafa nandripaka alika
Nahafaty alika 5 sy zanak'alika 1 ny biby anankiray antsoina hoe “Katraboana” raha ny fampitam-baovao momba ny zava-niseho tao amin’ny amin'ny Fokontany Antanambao Kaominina Andodabe,
Raharaha Anosipatrana Nitory eny amin’ny Filankevi-panjakana ny MBS
Nametraka fitoriana teny amin’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny Fanjakana ny mpisolovava ny Vondron’orinasa MBS Maitre Eloi Ratefimahefamijoro eo anatrehan’ny fanomezan’ny Ben’ny tanànan’Antananarivo fe-potoana 6 volana hanesorana ny MBS eny Anosipatrana.
Mahajanga Tsy naneno ny kiririoka
Nilamina ny tanànan’i Mahajanga. Nizotra toy ny isan’andro ny fiainan’ny mponina.
Hentitra ny ben’ny tanàna « Harodana ireo tsena, manangana avy eo »
Telo volana no nomen’ny Kaominina Antananarivo tarihin’ny Ben’ny tanàna Naina Andriantsitohaina hialan’ireo mpivarotra eny amin’ireo tsena vaovao eny amin’ny Pavillon Analakely, izay natsangana nandritra ny fitantanan’ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana.
Madagasikara Ahiana ho lany tamingana ny 25% n’ny harena voajanahary
Na dia ho voafetra hiampy 2˚C aza ny hafanana maneran-tany manomboka eto ka hatramin’ny taona 2100 dia ahiana ho lany tamingana ny 25%n’ireo harena voajanahary eto Madagasikara, raha ny tatitra nataon’ny rafitra iraisampirenena momba ny tontolo iainana na WWF.
Depiote Nina Voaasa hanotrona tolo-tanana atsy La Réunion
Hikarakara fanangonana tolo-tanana hanampiana ny tanindrazana ao anatin’izao ahamehana ara-pahasalamana izao ireo Malagasy monina atsy La Réunion ny sabotsy izao manomboka amin’ny 10 ora maraina ka hatramin’ny 6 ora hariva, ora any an-toerana.
Mpanao gazety Malagasy Misy miezaka mampisara-bazana
Tsy dia misy maha samihafa ny mpanao gazety sy ny skoto, hoy ny vazivazy zaritanany iray izay.
Fandrendreham-bahoaka na “manipulation de masse”, hoy ny sasany. Ny hafa indray moa dia nanamafy fa efa voalazan’ny soratra masina fa hipoitra any am-parany any ny mpaminany sandoka.
Nisy koa, mazava ho azy, ireo nino fa tena tantarana faminaniana marina ny horonantsary naseho tao amin’ny fahitalavim-pirenena [TVM] ny alin’ny alakamisy 16 aprily teo. Niteraka resabe ity horonantsary nitantara fandalovana ramatoa Brezilianina teto Madagasikara ity izay raha ny fitantaran’ny nanao fanadihadiana moa dia nanao faminaniana izy io fa tsy ho voakasiky ny Coronavirus I Madagasikara ary ho hita eto ny fanafodin’ity areti-mandoza manahirana izao tontolo izao ity. Mahagaga ihany anefa hoe nandany vola aman-karena sy fotoana nandalo teto ity lazaina fa mpaminany ity saingy mbola napetrany ny fepetra toy ny hoe “raha miova toe-tsaina ny malagasy”, hoy indray ny fitsikerana hafa. Ny hany hitako mitombona tao anatiny dia ny hoe mila miverina amin’Andriamanitra isika, hoy koa ny sasany. Maro dia maro noho izany ny resabe sy fihetseham-po naterak’ity horonantsary ity. Tao ireo sorena, tao ireo naneso, tao koa ireo nino fa mitombona izay voatantara tao. Fanontaniana lehibe mipetraka ny hoe fanodinana saim-bahoaka tokoa na ilay antsoina hoe “diversion” ve izy iny mba tsy hifantohan’ny vahoaka malagasy amin’ny tena zava-misy marina na ireo tsy fahatomombanana mitranga amin’ny fihatrehana izao ady amin’ny COVID 19 izao sa ho singa hanamarinana koa fa tena eto tokoa ny fanafodin’ity areti-mandoza ity? Efa maro ihany izay nilaza azy ho mpaminany sy mpahita nanambara fa tany hafa mihitsy izay i Madagasikara ary hisandratra ambony indrindra tsy ho ela saingy mbola ao anaty firenena miisa 4 mahantra indrindra aloha isika hatreto na dia malaza ho be harena aza.